Gudoomiye Ku xigeenka Gobalka Bay, Sandheere Max’ed oo eedeyn kulul u jeediyey Malaaq Beesha Hubeer – idalenews.com
Gudoomiye ku xigeenka Maamulka Gobalka Bay, Sandheere Maxamed Iftin oo ay wehliyaan siyaasiyiin iyo aqoonyahano beesha Hubeer oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulan la qaatey Gudoomiyaha barlamaanka Shariif Xasan Sheikh Aadan iyo Siyaasiinta ay ka mid ahaayeen Afaraale, Maxamed Ibrahim Xaabsade, Sheikh Aadan Maxamed Nur “Sheikh Aadan Madoobe” iyo xubno kale.
Gudoomiyaha ku xigeenka Gobalka mudane Sandheere oo kulankaas ugu horeyntii ka hadley ayaa sheegey in Malaaqa beesha Hubeer uu dhaqaale siistey kuraastii beesha laheyd, meeshana ay ka baxdey xubnihii beesha hubeer ee gobaladda Bay & Bakool iyo Gedo uga mid noqon lahaa barlamaanka cusub ee Somalia. iyadoo 2dii xubnood ee beesha laheydna la siiyey shaqsiyaad aan kalsooni ku laheyn beesha kana soo wada jeedo gobalka jubbada hoose. Waxuuna sidoo kale sheegey in guddiga farsamada “Arbitrary Committe” iyo Xafiiska Qaramada Midoobey iyo Saxiixayaasha Roadmap gaarsiiyeen arrintaas, ayna dhowrayaan jawaabta ka bixiyaan cabashada beesha gudbisey.
Guddoomiyaha Barlamaanka Shariif Xasan Sheikh Aadan oo isna ka jawaabaayay eedeynta beesha inuu faraglin ku lahaa waxa dhacey ayuu gudoomiyuhu iska fogeeyey laakiin shaqsiyan Malaaqa Xasan Shure kula taliyey oo kaliya in uu tixgeliyo rabitaanka inta badan beesha, la tashina kala sameeyo waxgaradka beesha si cadaalad ahna u soo xulo balse go’aanka uu ku gudbiyey xubno aan kalsooni ka haysan beesha hubeer ay isagu u gaar tahay hase ahaatee isagu wax ka ogeyn.
Si kastaba ha ahaatee beesha Hubeer ayaa qorsheyneysa in ay kulan balaaran isugu yimaadaan dhowaan kulankaas oo looga arrinsan doono sidii kalsoonida loogala noqon lahaa Malaaq Xasan Shure oo in ka badan 45 sano caqabad ku noqdey dhaqanka beesha, hanaanka nabada ee gobalka Bay & Bakool iyo inuu ku caan baxey masuqmaasuq isla markaasna masiirka beesha dhaqaale ku bedesho.
Ugu dambeyntii, Xildhibaan Xaabsade iyo Xildhibaan Afaraale oo kulankaas ka hadley ayaa iyaguna tilmaamey in ay arrintaas horeyba u ogaayeen, Malaaq Xasan Shure ku tilmaamey shaqsi ku sifoobey ka talisnimo iyo horumar la’aanta deegaanada beesha ee goballada Bay, dantiisa gaarka ah waxaan aheyn uusan ka fikirin. Siyaasiyiintaas ayaa sidoo kale sheegey iney kala shaqeyn doonaan horumarka beesha ku taameyso isla markaasina soo dhoweynayaan go’aanka aqoonyahanada iyo waxgaradka beeshu gaarto.